Ciidanka Kenya oo burburiyey xarun isgaarsiineed ay leedahay Shirkadda Hormuud - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidanka Kenya oo burburiyey xarun isgaarsiineed ay leedahay Shirkadda Hormuud
Ciidanka Kenya oo burburiyey xarun isgaarsiineed ay leedahay Shirkadda Hormuud
Iyadoo ay weli sii socoto burburinta Ciidanka Kenya ay ku hayaan xarumaha Shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya ee gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ayay ciidamada Kenya waxay mar labaad bur buriyeen xarun ku taalla deegaanka Jaldeyse oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee maamul goboleedka Jubaland.
Ciidamada Kenya ayaa bur burinta xarumaha u adeegsaday miinooyin waa weyn, iyadoo ay bur bureen Tower-adii dhismihii shirkadda iyo dhammaan agabkii isgaarsiineed oo ay ku shaqeyneysay xarunta oo ka koobnaa qalabkii isgaarsiinta, motooro iyo gawaari.
Waxaa hadda hawada ka maqan isgaarsiintii deegaanka Jaldeys, iyo Tuulooyinka hoos yimaada iyadoo uu hakad galay isticmaalka adeeggayada muhimka u ah isu socodka bulshada sida igaarsiinta, EVC Plus-ka iyo kuwo kale ay dadka noloshoodu ku tiirsaneyd arrintaas oo sababi karta barakac ku yimaada dadka ku nool deeganadaasi.
Dadka deegaanka ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in ciidanka Kenya oo wata gawaarida dagaalka ay burburiyeen xarunta shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ay ku leheyd deegaankaas, iyagoona baaq u diray Dowladda Soomaaliya in ay arrintan wax ka qabtaan.
Ciidanka Kenya ayaa sanadihii la soo dhaafay burburin sharci darro ah ku hayey Xarumaha shirkadda Isgaarsiinta ee Hormuud sida: Jaldeys, Cali Buley, Diif, Khadiijo Xaaji, Ceelbaande, Dhuyacgaroon, Geriley iyo Dhamase oo ka kala tirsan Gobollada Jubboyinka iyo Gedo.​
12 xarumood ay leedahay shirkadda Hormuud Telecom ayay horey ciidmaada Kenya u burburiyen, mana jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Kenya ay arrintaan uga hadlayaan.
Madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay labo arrin oo keentay inuu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod
Madasha xisbiyada oo ku baaqday in Saamileyda Siyaasadda qeyb ka noqdaan guddiyada doorashada
Madaxda Hirshabelle oo loogu baaqay inay si deg-deg ah ugu soo laabtaan Jowhar